ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလမ်းကြောင်း (တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း)
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလမ်းကြောင်း (တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာ ကျန်ကမ္ဘာ့နှိုင်ငံအချို့မှာလို အာဏာရှင်စနစ်ကို လုံးဝတွန်းလှန်ဖြိုဖျက်ပြီးမှ စတင်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲ စနစ်ဟောင်းနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုရင် မှားမယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုထူးခြားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုပုံစံဟာ ဒီမိုကရေစီ ပီပီပြင်ပြင် ထွန်းကားရေးအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသလား၊ အဟန့်အတားဖြစ်စေသလား ဆိုတာကို လန်ဒန်အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးသုံးသပ်သူ ဦးအောင်ခင်၊ မြန်မာ့အရေးလေ့လာသူ စာရေးဆရာ ဂါမဏိကို ပင်တိုင်ထားပြီး သောတရှင်တွေကို ဖိတ်ခေါ်ကာ ဦးကျော်ဇံသာက ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
I agree with Dr Aung Khin's criticizes.Yes they just trying to get international's acknowledge.They never change witout mass power.
ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ သမ္မတကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စုကြည်တို့ သဘော
ထား ပျော့ပျောင်းရုံနဲ့ မပြောင်းနိုင်ဘူး ။
၁ ။ တည်ဆဲဥပဒေများအတိုင်းအသက်ဝင်အောင်လုပ်ပါ။
၂ ။ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းတချို့ မှာ ဟစ်တလာပုံစံ စစ်ဝါဒီ အာဏာရှင်တွေ ရှင်းပါ။
၃ ။ မဲဆွယ်စည်းရုံစဉ်ကအတိုင်း ပြည်သူတွေကို ဆောင်ရွှက်ပေးသလား?။
၄ ။ အခွန်ရှောင်နေသူတွေ ကို ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပြီးပြီလဲ?
၅ ။ ပြည်သူတွေ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေ ကို ဥပဒေနဲ့ မညီတဲ့ စကားတွေနဲ့
လူသိရှင်ကြားစော် ကားတာ ဘယ်သူတာဝန်ယူဖြေရှင်းသလဲ?
၆ ။ လပ်စားမှု ကိုစစ်ဆေးမယ့်လူကြီးတွေ ကိုယ်တိုင် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မှု